Maalinta Furan ee Libertya 2017 - Sebtember 7 | Laga soo bilaabo Linux
Maalinta Furan ee Libertya 2017 - Sebtember 7
Dhacdo cusub ayaa timid oo kulmisay bulshada xorriyadda shirkadaha guud ahaan, si ay ula wadaagaan maalin cusboonaysiinta iyo ganacsiga.
1 Halkee iyo goorma
Halkee iyo goorma
Ballanta waa Khamiista, Sebtember 7 hudheelka Savoy (Av. Callao 181 - CABA) ee Argentina laga bilaabo 8.30 am.
Inta lagu jiro Maalinta Furan ee Libertya adeegyada cusub ayaa la soo bandhigi doonaa On Codsiga y Dhismaha loo sameeyay gaar ahaan qaybta SME.
Intaa waxaa dheer, wadahadalo farsamo ayaa lagu qaban doonaa isdhexgalka xogta iyo xulashooyinka soocelinta, barnaamijka waxaa lagu dhameystirayaa sheekooyin dhowr ah oo guul leh oo muujinaya awooda iyo dabacsanaanta sheyga.
Inta lagu jiro maalinta, kuwan soo socda ayaa isku mar la qaban doonaa:
Kulamada isku xirka iyo wareegyada ganacsiga.
La-talin bilaash ah kooxda farsamada.
Istaagyada ay ka soo qaybgaleen shirkado caan ka ah bulshada bahwadaagta ah.
Demo LibertyaERP imtixaannada
Si loo soo afjaro dhacdada, Goob Furan ayaa la qaban doonaa; loogu talagalay in kaqeybgalayaashu ay: faallo ka bixin karaan, ka doodi karaan kana doodi karaan arrimaha soo ifbaxa inta lagu jiro bandhigyada iyo / ama howlaha kala duwan ee Maalinta Furan ee Libertya.
Diiwaangelinta iyo macluumaadka bogga dhacdada. Tigidhada bilaashka ah, emayl: libertya.gestion@gmail.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Maalinta Furan ee Libertya 2017 - Sebtember 7
Rumayso xirfadahaaga Linux, laakiin waligaa ha joojin wanaajintaada
Maanta 24 sano ayaa laga joogaa markii uu dhashay Debian